China F720-High ike na-akpụ akpụ na-asacha mbugharị n'èzí ọkụ na 18x40W dugara Nlụpụta na orylọ Ọrụ | Banyere
F720-Ike dị elu na-agagharị na-eme ka ọkụ dị n'èzí na 18x40W duru
Ike dị elu na-asacha mbugharị ọkụ n'èzí na 18x40W duru bụ akwa nchapụta ma fechaa n'èzí Dugara ịsa ìhè. Adabara niile ụdị ime ụlọ na-egosi, concerts, nkiri ma ọ bụ n'èzí ihe, Landscape ọkụ. Iberibe 18 iberibe 40W dị elu dị elu, nke ọ bụla na-eduga dị ka otu ngalaba nwere ike ịrụ ọrụ na ngwa ngwa mmiri na-agba ọsọ. Ọ bụghị naanị na ọkụ dị n'èzí na-asacha ọkụ, nwekwara ike iji dị ka ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ na ogbo. Ekele maka ụdị pụrụ iche nke optic, nye 3,2 Celsius doo na warara nkuku, na 50 Celsius na obosara. Ha abụọ nwere mmetụta ọkụ na mmetụta nchacha ebe niile.
Ike dị elu na-asacha mbugharị ọkụ n'èzí na 18x40W duru
Qualitylọ ihe eji eme mmiri dị elu dị elu na arụmọrụ dị mma. Aesthetic ọdịdị imewe, ala mkpọtụ ofufe, IP65 waterproof nchedo Power-con na na si anya. Akwa ihie na ọtụtụ-asa ikike, doro anya na edo na agba. 4 Dimmer nlereanya na igbu oge ma ọ bụ n’egbughị oge, 0-100% linje dimming na flicker free.
Preset bara ọgaranya na agba na ụkpụrụ Marco, ọ bụla abụọ ada nwere ike na-achịkwa ngalaba. Ikanam nwere elu okpomọkụ nchedo na ike na akpaaka ịgbanwe ya ihie nwayọọ nwayọọ dị ka isi okpomọkụ.
Isi mmalite 18 * 40W 4IN1 RGBW ikanam Tilt 270 Celsius
Doo n'akuku 3,2 Celsius - 50 Celsius Ihe owuwu
Oriri Ike 720W Ngosipụta 180 Celsius reversible LCD Display
Njikwa Data In / Out oghere 3-pin XLR sockets
Modkpụrụ Njikwa DMX512 / mater-Slave / Auto Run / Music Ogwe Ike Waterproof Powerconcon n'ime / n'èzí
Ọnọdụ DMX 19/25 / 61CH Iwu Nchedo IP65
Akwa ihie, obere nha, ibu dị arọ Akụkụ 508 * 208 * 351 MM; Nw: 16 kgs
The ntule akuku na ọnọdụ nwere ike gbanwee kpamkpam, na nwekwara ike-eji dị ka a na-anya oru ngo ìhè Ọkọlọtọ ngwugwu: katọn; Ọnọdụ ụgbọ elu na nhọrọ
3-adọ Y-axis moto / Nano moto ； 9-Mpaghara na-achịkwa Asambodo
Adabara ebe: ogbo, egwu, nkiri, n'èzí ọkụ, wdg OA, ROHS
Ajụjụ: M na-achọkarị ịtụ ọkụ, ọ bụrụ na enwere m obi ụtọ na ha, ma jide n'aka na oge ọ bụla m nwere ike ịnweta otu ngwaahịa ahụ dị m ezigbo mkpa, ị nwere ike ịghọta nke ahụ?
Re: N'ezie! Anyị na-etinye oke mkpa iji hụ na nkwụsi ike na ịga n'ihu nke ngwaahịa anyị.Ọbụna ọhụụ ọhụụ anyị na-anwale ọtụtụ oge tupu anyị ekpebie ire n'ahịa. Anyị ga-agwa ma soro ndị ahịa rụkọ ọrụ ọnụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ imelite ọkụ, maka ngwanrọ ma ọ bụrụ na emelitere anyị ga-edebe ngwanrọ gara aga maka ndị ahịa ịhọrọ.
Ajụjụ: Ọ bụrụ na m zụrụ gị ọkụ, ọ ka ga-akwụ m mkpa ịkwụ ụgwọ ụtụ isi ebe a?
Re: Ọ dabere na iwu mbubata obodo gị. Mba dị iche iche amụma ya dị iche, ụfọdụ mba ma ọ bụrụ na obere ego adịghị mkpa ịkwụ ụtụ. N'ebe ụfọdụ, anyị nwere ike ịnye ụzọ ụgbọ mmiri pụrụ iche nke gụnyere ntinye akwụkwọ ikike na ụtụ isi gị, yabụ ka mma ịjụ anyị.
Q: Olee otú ọtụtụ afọ gị factory tọrọ ntọala?
Re: Beyond ọkụ tọrọ ntọala na 2010, na anyị nwere 10 afọ ogbo ogbo R & D ahụmahụ na now ukwuu n'ime ngwaahịa ndị anyị onwe ngwaahịa.
Mbupu ngwongwo na ụlọ ọrụ
Nke gara aga: M52-ọkụ ọhụụ kachasị ike 24 * 60W Led bee eye moving head light
Osote: 660-6 * 60W Pixels na-achịkwa ogwe mbugharị mbugharị isi na-enweghị oke rotationg
M52-kacha ọhụrụ ogbo ọkụ dị ike 24 * 60W Dugara b ...